विवाह गर्नुअघी आफ्नो जो’डिलाइ सोध्नै पर्ने ३ कुरा ! ( सबैले जानी राखौं ) « गोर्खाली खबर डटकम
तपाईं विवाह गर्नेबारे सोचिरहनु भएको छ ? यदी तपाईंले त’त्काल विवाह गर्नेबारे सोच्नुभएको छ भने विवाह गर्न लागेको पा’र्टनरसँग खु’लेर कुरा गर्नुस्, आफ्ना कुरा र उनका कुरा सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुस् । यसरी खु’लस्त भएर विवाह गर्दा आगामी दिनमा तपाईंको बैवाहिक अवस्था सुखद् बन्न जान्छ । विवाहलाई लिएर मानिसले केही खालका सपना देखेका हुन्छन् ।
सबै आफ्नो विवाहलाई यादगार बनाउनका लागि खानादेखि विवाहको स्थानसम्मको पूरा योजना बनाउँछन् । जो व्यक्तिसँग आफ्नो पूरा जीवन जिउने अवस्था बनेको हुन्छ उसँग हरेर विषयमा खु’लस्त भएर कुरा गर्न र विवाह भन्दा पहिला केही प्रश्नहरु गर्न आवश्यक हुन्छ । ताकि विवाह भन्दा पहिला एक अर्कालाई राम्रोसँग बुझ्न सहज हुन्छ ।
आर्थिक अवस्था– विवाह भन्दा पहिला कयौं पा’र्टनरसँग यो सवाल सोध्न चाहन्छन् तर चाहेरपनि यो सोध्न सक्दैनन् । किनकी धेरैलाई पैसा सम्बन्धी धेरै कुरा सोध्न र बुझ्न ड’र लाग्छ । तर विवाह भन्दा पहिला आफ्नो पा’र्टनरको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी लिन आवश्यक छ ।
फ्यामिलि प्लानिङ– विवाह भन्दा पहिला पा’र्टनरसँग फ्यामेलि प्लानिङका बारेरमा जरुर कुरा गर्नुहोस् । जब दुई मध्ये एक व्यक्तिलाई बच्चा चाँढो चाहिएको छ भने भने यस विषयमा विवाह भन्दा पहिला कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । तपाईलाई कहिले बच्चाको बारेमा सोच्न जरुरी हुन्छ भन्ने विषयमा प्रस्ट हुनु जरुरी हुन्छ ।
वानिव्यहोरा– विवाह भन्दा पहिला आफ्नो पा’र्टनरको वानी व्यहोरा बारे जानकारी लिन जरुरी हुन्छ । प्रेम सम्बन्ध भएकाहरुले बानी व्यहोरा बारे जानकार भएको भएपनि मागी विवाह गर्नेले आफ्नो पार्टरको बानी व्यहोरा थाहा नपाएको हुनसक्छ । त्यसलैले उसलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएको खण्डमा सहज हुन जान्छ । यसरी पार्टनरको बानी व्यहोराबारे जानकारी लिँदा दाम्पत्य जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।
सदाबहार साझेदार चीन पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा दरार